Kushambadzira: Sei Vatengi Vakahwina Hondo Yekutarisisa Kwavo | Martech Zone
China, July 11, 2013 Chitatu, July 10, 2013 Douglas Karr
Mune ino epic, inofanirwa-kuona mharidzo, Hubspot inotsvaga YEMAHARA nhoroondo uye shanduko yekushambadzira kuti ifumure kuti yakazara sei (asi inogayikwa) nguva yekushambadza zviitiko zvakakonzera kune denda rekusava nehanya kwevatengi, pamwe neizvo vatengesi vanogona kuita nezvazvo kusvika kune vatengi mumakore anotevera.
Usatomboodzwa moyo neiyo 472 masiraidhi - 29.39% yeavo akakumikidzwa kune anotyisa mifananidzo uye mifananidzo inoitisa iyi mhepo kuti ipfuure. Dhawunirodha a yemahara kopi yeiyi mharidzo + inodhindwa yekushambadzira nguva.
Hezvino zvinhu makumi maviri zvinonakidza zvakasanganiswa.
Kushambadzira kwave kuripo kusvika kumashure se 3000 BC!
63% yevatengi inoda kunzwa kambani ichiti 3-5 nguva vasati vatenda chaizvo.
Iwe unowanzo pona kuparara kwendege pane kudzvanya shambadziro yebhana.
Yekutanga pepanhau kushambadza yaive muna 1650 yekupa mubairo wemabhiza gumi nemaviri akabiwa.
Yekutanga nyanzvi yekushambadzira agency yakatangwa muna 1841 muPhilly.
Kushambadzira kwakatanga kuve chirango chedzidzo muna 1900 kuNorthwestern.
Unilever & JWT yakatanga kubatana muna 1902, ichigadzira hukama hwakareba kwazvo munhoroondo yekushambadzira.
Mucherechedzo wevacheche fomula ndiyo yaive yekutanga kutsigira blimp (muna 1902).
Yekutanga kushambadzira agency kutanga chigadzirwa yaive JWT pachinzvimbo cheP & G muna 1911, kune yavo chigadzirwa Crisco.
Yekutanga redhiyo kushambadzira nzvimbo yakapihwa muna 1922: $ 100 kwemaminitsi gumi!
Muna 1929, Lucky Strike akashandisa $ 12.3M kushambadziro, yakanyanya kwazvo munhoroondo kusvika ipapo kusimudzira chigadzirwa chimwe chete.
Yekutanga kushambadzira kweTV yaive yeBulova Clocks & yakasvika 4000 maTV.
Muna 1946, iyo US yaive ne12 terevhizheni. Pakazosvika 2011? 1,700.
Yekufona ID yave iripo kutarira telemarketer kubva 1981.
Muna 1993, iyo internet yese yaive nevashandisi mamirioni mashanu - kana 5% yeiyo Facebook yazvino mushandisi base.
Iyo yekutanga email spam yakatumirwa nekambani yeCanter & Siegel yemutemo muna 1994.
Muna 1998, mutengi wepakati akaona zviuru zvitatu zvekushambadzira pazuva.
Muna 2009, FTC yakatanga mirau yakati rebei inorambidza humbowo hwevatengi husiri hwechokwadi.
Muna 2011, pakanga paine anopfuura 1 tiririyoni mapeji online. Ndiwo mapeji 417 emunhu mumwe nemumwe!
Eric Schmidt weGoogle akataura kuti “Mazuva maviri ega ega, tinogadzira ruzivo rwakawanda sezvatakaita kubva pakutanga kwebudiriro kusvika 2.